February | 2010 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပေါ်ထွက်လာသည့် ငါးထောင် ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအား လာဘ်လာဘ မကောင်းသည့် ငွေစက္ကူ အဖြစ်သုံးစွဲသူအများ အပြားက ရှုမြင်လျက်ရှိကြပြီး လက်ဝယ် ကြာရှည်စွာ ကိုင်မထားလိုဘဲ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည် လဲလှယ် သုံးစွဲကြသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောဆိုသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in Burma News Headlines
ယမန်နေ့က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြီးကြောင့် ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီးများ ဆိုက်ရောက်လာဖွယ်ရှိသည်ဟု တပ်လှန့်ထားသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Shichigahama ဒေသမှ ဒေသခံများ ယနေ့ ပင်လယ်ကို စောင့်ကြည့်နေကြပုံ။ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးတချို့ ဂျပန်သို့ ယနေ့ ရောက်လာသော်လည်း ပျက်စီးထိခိုက်မှု မရှိဟု သိရသည်။ (ဓာတ်ပုံများ – AP) Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in News in Photos
Sing Hip Hop?
ငါ ဟစ်ပ်ဟော့ ဆိုရရင် ကောင်းမလား
[မူရင်း – yaw-han-aung.blogspot.com]
ငါ ဟစ်ပ်ဟော့ဆိုရရင် ကောင်းမလားတွေး။
ငါကလည်း နည်းနည်း ဆရာကြီး လုပ်ချင်နေတာနဲ့မော။
သူတို့ အိုင်ဒီယာ ပြောနေတာတွေလည်း သဘောမကျ…
မယ်လိုဒီ မဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ ငါ့လက်သံအစုတ်အပြတ်ကိုလည်း ဒေါပွ။
ရေးတဲ့ကဗျာတွေ မဂ္ဂဇင်း မရွေးတာလည်း တဒုက္ခ
နောက်ဆုံးတော့ ဘလော့ဂါ လုပ်ရတာပဲ မုချ….။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in poem
ဟေတီ – ၂ သိန်းကျော် သေဆုံး Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in News in Brief
၀ါရှင်တန် အခြေစိုက် အမျိုးသား သမုဒ္ဒရာနှင့် လေထုအဖွဲ့ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) က ထုတ်ပြန်ထားသော ပုံတွင် ချီလီနိုင်ငံ ငလျင်ကြောင့် ဆူနာမီလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်ရွေ့လျားနိုင်ပုံကို အချိန်နှင့်တကွ ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားသည်။ (ဓာတ်ပုံများ – Reuters သတင်းဌာန)
ထိုသတင်းမှာ မြန်မာစံတော်ချိန် စနေနေ့ည ၁၁း၃၀ နာရီတွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် သတင်း ဖြစ်သည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in Overseas News
Mar Mar Aye – 308
ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ် ၃၀၈
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝ၁၀
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ပေါ်ရှိ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားကျောက်စာတိုင်(photo: Danburg Murmur)
သောတရှင်တို့ရေ၊ မာအေးလဲ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ဟောပြောပွဲနဲ့ စပ်ပျိုးပြီး ပြောလာတာ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ဘယ်လို ဘယ်အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ နေရာကို မရောက်နိုင်သေးပါလားလို့ သတိရပြီးတော့ ကြာနေတဲ့ အတွက် အားနာပါတယ်။ သဘင်၊ ဂီတသဘောနဲ့ ပြောရင်တော့ ကျင်းတူးနေတာပါ။ ပျိုးနေရလို့ပါပေါ့နော်။ ကြားမှာ သိစေချင်တာလေးတွေ ကြုံနေတော့လဲ ချစ်ဆွေတို့ကို လက်တို့ချင်တော့ ရှည်မိသွားတာပါပဲ။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on February 28, 2010 in Mar Mar Aye
ယနေ့ ရန်ကုန်တွင် ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသော တရားရုံးချုပ် စီရင်ချက် သတင်း
“တရားရုံးချုပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျနော်တို့ ရှုတ်ချပါတယ်” ဟု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးက ပြောသည်။ Read the rest of this entry »